Ini ndichatanga Bhizinesi Rekushambadzira
Chishanu, December 3, 2010 Mugovera, October 18, 2014 Nick carter
Chii chaunowana kana iwe ukasanganisa yakakwira urovha chiyero neakanyanya kudzidza (vamwe vanoti pamusoro-vakadzidza) nzanga? Vanopa mazano, hongu. Mazhinji acho. Mushure mezvose, kana wanga uri mukushambadzira kwekambani kwemakore makumi maviri neshanu pawakave nerombo rakanaka kuti waunoshandira akubhadharire iwe kuti uve "tenzi webhizimusi manejimendi" vasati varega kukubhadhara iwe zvachose… ndiani zvirinani kumhanyisa femu yekushambadzira. !
Pane joke rinomhanya mudivi rezvemabhizimusi - kureva kuti, rakabuditswa kunze, nyika isiri yemakambani nyanzvi dzekutengesa mune chero chinzvimbo. Iyo jee ndeiyi: pese panenge paine kuraswa, tinowana vamwe vakwikwidzi. Uye, nepo pasina mukuru anotsigira zvemabhizimusi kupfuura ini, ini ndichine chiyero chakanaka chekushora kana vanhu vazhinji vakaturika shingle yavo.
Dambudziko nderei? Chiitiko. Mune umiriri hwebhizinesi, ndiko kuti, kwete mukushambadzira. Iwe unogona kunge uri chinhu chakakosha semugadziri, munyori, kana mushambadzi wezano musangano rako rapfuura. Asi chiitiko ichocho chinongokushongedzera iwe kugadzira zvigadzirwa. Iye zvino pane chinotungamira chebhizimusi rako pachako, pane miedzo mitsva yekutarisana nayo. Uye kwete zviri pachena chete: accounting, mutero, HR, kutengesa, nezvimwewo Kunyangwe mukati mekushambadzira chirango, iro basa reanachira rakasiyana zvakanyanya kupfuura iro remuimba nyanzvi. Chipangamazano anofanira kuona matambudziko uye nekugadzirisa mhinduro nguva refu vasati vatanga kuita chirongwa ichi. Uku ndiko kubvunzana kwepamusoro-soro uko vazhinji vanonzi vanachipangamazano vanotambura kununura, kana zvachose kukanganwa.
Ndeipi zvino mhinduro? Isu isu, nharaunda yekushambadzira, tinofanirwa kurega izvi zvinokwira-uye-zvinouya mune yepamusoro elitist? Inoita a nyanzvi "yekushambadzira nyanzvi" kudanwa inoda kuvapo? Kana chirongwa chemufambi chingagadzirirwe avo vanoedza kuzviita tanga bhizinesi rekushambadzira?
Munzira dzakawanda, chirongwa chemufambi ichocho chatove chiripo. Zvinoda asi chiito chimwe chekuzvininipisa: kuzvisarudzira sekudaro. Vanopfuura vashoma vevanoremekedzwa varidzi vekutengesa vandinoziva nhasi vakatanga pasi pechishoma chirevo – iyo freelancer Kunyangwe isinganetsi pakadhi rebhizinesi, kuzvimiririra zvakadaro hazvo kune mutengesi ane hunyanzvi - avo vasati vagadzirira kubhururuka vari vega - vanokodzera zvakanyanya mukutakura kwekushambadzira kwekunze. Kwete sekusiiwa zvine hukasha nekushevedzera kushoma, asi mukugadzirira basa raanogona kunge asati agadzirira kuzadzisa… asi rimwe zuva, ndine chivimbo, ndakakwanisa.
Tanga bhizinesi rako, asi tanga pakutanga. Uye, rombo rakanaka.
Tags: bokafreelancemufambiwekushambadzira agencykushambadzira bhizinesikutanga kwekushambadziratanga
Nick Carter zvechokwadi muzvinabhizimusi pamoyo. Iye ndiye munyori we Asina mari, pamwe chete neiye muvambi weAdressTwo, a Bhizinesi duku CRM software iyo inopa vanamuzvinabhizimisi maturusi nemaitiro ekugadzirisa kwavo kutengesa uye kugadzirisa kushambadzira kwavo.
Pamwe Hausati Wakanaka pane Izvi